IKHALENDA NEZIKHATHI ZESIKHATHI
Siyazi ukuthi abafundi bethu baya ngokuya bengena kwi-Intanethi, esikoleni nasemakhaya. Siyakubona ukubaluleka okudlalwa ngabazali nabanakekeli ekuqinisekiseni ukuthi izingane zakho ziyasiqonda isidingo sokusebenzisa i-Intanethi ngendlela efanele.
Njengoba ubavikela emhlabeni wangempela, siyazi ukuthi ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi izingane zakho ziphephile naku-inthanethi. Amakhono okuphepha aku-inthanethi ngamakhono empilo. Lapho izingane zakho ziqonda izingozi ezihlobene nokuba ku-intanethi, zingaba abasebenzisi be-Intanethi abanengqondo, futhi abanolwazi. Sonke sifuna ukuthi bathole okuningi kwi-Intanethi kepha bahlale bephephile ngenkathi benza kanjalo.
Kunezinsizakusebenza eziningi ezitholakalayo zokugcina unolwazi futhi ukukusiza ukugcina izingane zakho ziphephile ku-inthanethi. Kukhona nezinsiza ezingakusiza uma izingane zakho zithola izinto ezingaba yingozi noma ezingafanelekile kwi-Intanethi.
Isikole sethu sisekela umsebenzi we-CEOP futhi ekhasini lethu lokuxhumana uzothola ukuxhumana okuqondile nesikhungo sokuphepha se-CEOP. Ukuchofoza lesi sixhumanisi kuzokuxhumanisa ngqo ne-CEOP, lapho ungabika khona ukungaziphathi kahle kwe-inthanethi.
Izilawuli nezihlungi zabazali
Abahlinzeki Bezinsiza ze-Inthanethi (ama-ISP) noma iziphequluli zewebhu zinikeza izilawuli nezihlungi zabazali ukuze ukwazi ukukhawulela okungafinyeleleka kukhompyutha yakho. I-ISP noma isiphequluli osisebenzisayo sizonquma inqubo yokuzifaka. Ngakho-ke, asikwazi ukubhala zonke izindlela. Uzodinga ukuxhumana ne-ISP yakho (isb. I-Sky, i-BT, i-Talk Talk njll) ngemiyalo ethile yokuthi ungazisebenzisa kanjani izilawuli zazo. Kodwa-ke, ngezansi kukhona izixhumanisi zemiyalo yokuthi ungazifaka kanjani izilawuli zomzali kuziphequluli ezimbili zewebhu ezivame kakhulu - iGoogle Chrome neInternet Explorer.
Lawa mavidiyo alandelayo enziwe njengengxenye yocingo olubizwa nge-Live My Digital ngokubambisana ne-Digital Awareness UK ukuze kusizwe abazali nezingane baqhubeke nokuqonda izinselelo zemvelo eku-inthanethi. Uchungechunge oluphelele lungatholakala ku-https: //www.gdst.net/livemydigital
I-CEOP ibuye isebenzise iwebhusayithi yeThinuknow, enezinsiza eziningi zemfundo ukusisiza sonke sisebenzise abasebenzisi be-inthanethi abanolwazi. Kunezinsizakusebenza ezihambisana nobudala kanye nesiza esizinikele ekunikezeni izeluleko kubazali nakubanakekeli.
Iwebhusayithi yeChildline inikeza izeluleko nokwesekwa kanye nenombolo yosizo yamahhala, eyimfihlo.
I-Internet Watch Foundation inikezela ngomakhalekhukhwini ukuthi umphakathi ubike ngokuqukethwe okuku-inthanethi obugebengu.
Isikhungo Esiphephile Se-inthanethi sihlinzeka ngamathiphu okuphepha nge-e, izeluleko nezinsizakusebenza zentsha.